Date My Pet » Red enina saina ny mamantatra amin'ny The First Date
Raha mikasika ny daty voalohany, misy dia mety ho be ny fanerena manodidina azy. Inona no mba akanjo, lalana tokony haleha sy ny zavatra tokony hiresaka mihitsy aza momba ny. Mety ho somary daholo be. Na izany aza, misy vitsivitsy tena manan-danja tokony ho fitondran-tena ianao no handrandraiko fa amin'ny daty voalohany. Aho miresaka momba ny sainam-pirenena Natahotra fampitandremana mena famantarana.
Tsy ho sahiran-tsaina takarina amin'ny daty voalohany, izany aho hoe tsy tokony mamakafaka fehezanteny sy ny hetsika rehetra ny daty mahatonga, fa misy vitsivitsy tena olana ho onja no handrandraiko ho.
Mandefa SMS nandritra ny Date
Azoko iainantsika izao ao amin'ny fiaraha-monina mavesatra teknolojia, fa vao mametraka ny telefaonina izy. Ny SMS nandritra ny daty toy izany dia tsy mahalala fomba fihetsika. Tsy misy zavatra mahatonga ny olona hahatsapa toa izy ireo uninteresting loatra ny mihaino noho ny mandefa SMS nandritra ny daty. Ny andinin-teny ho any amin'ny havanao dia afaka miandry ora vitsivitsy. Ka rehefa avy ny lohan'ny daty voalohany, mametraka ny telefaonina ao amin'ny mangina dia hamela izany ao am-paosinao, na kitapom-bola ho an'ny sisa amin'ny daty. Raha tsy afaka mametraka ny telefaonina manokana amin'ny daty voalohany, Azo inoana fa mihoatra noho izy ireo tsy mametraka ny telefaonina teo.
Too firaisana tia ady
Misy fahasamihafana eo amin'ny maha flirty sy ho ara-nofo explicated. Ny fanaovana fanehoan-kevitra tsy manan-tsiny vitsivitsy tsara (toy ny akanjo fohy complementing na ny bika aman'endriny), fa raha manomboka manao vetaveta kokoa hevitra, tokony rariny ve ny daty. Ny olona rehetra dia tia ny Hameno, na izany aza manana olona Mitsapatsapa ny tongony, ary hilaza aminao ny ratsy izy ireo te-hitondra anao an-trano dia vao nahazo aina. Raha mitady ny fifandraisana maharitra, tianao ny daty izay miezaka ny hahafantatra anao fotsiny, fa tsy mifantoka amin'ny fahazoana anao teo am-pandriana.
Avy hatrany Critical
Fa tsy tsara raha toa ny daty famantarana vao nanomboka, ary izy / izy no efa fitsikerana anao. Ohatra: raha vao tonga avy any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, ary mampahafantatra ny daty sy ny misy izany valin-dia zavatra toy ny "Oh, ka ny olona tsara fanahy IZANY. Total fanaovana fanatanjahan-tena voalavo?", Na rehefa tonga mba hihaona ny daty ireo fanakianana izay nanao. Raha toa ka mitsikera anareo izao tany am-boalohany ao amin'ny, Azo inoana fa izany fomba haharitra, ary ho foana ny mitsara ny safidy.
Be resaka loatra About Tena
Ny resaka tsara matetika dia ahitana ny mitovy nizara fifanakalozana. Misy ihany koa ny fotoana izay raha ny daty na saro-kenatra, sariaka kokoa ny anankiray aminareo roa hitondra bebe kokoa ny resaka, izay tsara. Na izany aza, raha ny daty no tena manenjika ny resaka, izay foana ny daty miresaka momba ny tenany, ho lasa somary mandreraka. Na dia ratsy, raha nanapaka anareo hiala rehefa miteny ianao hiresaka bebe kokoa momba ny tenany. Ny daty no fahafahana hianatra bebe kokoa momba samy izy, ary jereo ny fomba mifandray, tsy fahafahana ho monologue mikasika ny fomba mahagaga sy tanteraka ianao.
Asa sy Living Zava-misy
Tsy hoe aho mba tsy handeha amin'ny daty amin'ny olona izay mipetraka ao an-trano ary ny toe-karena tsy an'asa-dia mafy izany andro izany, izany mahagaga. Raha tsy nanana fidiram-bola-tranon'omby nandritra ny taona maro, ary kely loatra toa mahazo aina miaraka amin'ny velona ny ray aman-dreny fifanarahana amin'ny an-tranon'ny, angamba tokony hifindra amin'ny. Tokony koa manahy raha tsy afaka hilaza aminao ny zavatra marina ataony ho velona. Nahoana izy io no manafinafina momba ny asa fa tsy afaka milaza ny daty? Mety tsy te-hahafantatra ny valiny…
Na dia mety ho toa mazava be iray (tahaka ny daty voalohany dia tsy fotoana lehibe hiresaka fifandraisana teo aloha), raha mitaiza ny taloha, Tandremo ny fomba izy ireo miresaka momba azy ireo. Tena tsara raha manonona azy ireo fohifohy fotsiny, fa raha milaza aminareo ny zavatra ho psycho izy azy sy tena izy ireo mankahala azy, tena tsy drafitra daty faharoa. Mahery vaika isan-karazany na Miondrika resaka momba ny lasa mpiara-miombon'antoka dia mampiseho fa mazava dia tsy niova tamin'ny amin'ny fifandraisana, na izany fotsiny izy ireo mangidy sy lozabe, izay nitranga izany ho tsara indrindra tsy mbola nahita azy ireo.